Qaabka ay Seynis Yahanadu u Magacabaan Xayawaanada |Tukesomalis.com | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Sahal Issaakh — May 26, 2016
Qaabka hada la isticmaalo ee magac loogu bixiyo xayawaada waxaa soo hormariyay Carolus Linnaeus qarnigii 18 aad. Qaabkaan ayaa ah mid ay xayawaanadu leeyihiin labo magac oo ah Luuqada Laatinka. Waxaana sabab u ahayd in Luuqada Laatiinka aad loo isticmaali jiray xiligii Seynis yahanada aduunka ay ku jireen soo saarista cilmiga baahsan ee maanta dunida aan ku noolnahay lagu isticmaalo.
Gabi ahaanba waxaa xayawaanada la siiyaa laba magac oo kala aha midka macaga guud ee markaas goobta uu xawaanka ku nool yahay looga yaqaano iyo mid Seyniska ku saleysan. Tusaale jiir waa magaca guud ee loogu yeero xayaawaankaan luuqada Soomaaliga, Paka Luuqada Kiswaxiliga, arintani waxaa ay abuurtay in ay is fahmi waayaan Seynis yahanada ka kala socday wadama badan oo ku kala duwan luuqadaha waxaana ku adkaatay in ay wadaagaan cilmi ka aqbaaraadkaba. Tani waxaa sababtay in la soo alifo luuqad ay leeyihiin Seynis yahanada oo ku saleysan luuqada Laatiinka.
Magac yada Seyniska ah waa magacyo la isku raacan looguna yeero dhamaan xayawaada aduunka oo idil,. Xayawaanka waxaa la siiyaa magac qaas ah oo la xiriira labo magac qaabkaan magac bixinta waxaa loo yaqaanaa Binomial System (Qaabka siinta labada magac). Qaabkaan ayaa ka kooban waxa loo yaqaan genus iyo species.
Markii aad rab in aad magac siiso xayawaan waa in aad ku isticmaashaa qodobadaan soo socda:
Qeybta ugu horeysa ee magaca waa Genus ka waana in ay ka bilaabataa xaraf weyn, qeybta labaad ee magaca waa species ka waana in aad ku qortaa xarfo yaryar. Tusaale Lion waxaa loogu yeeraa Panthera leo, Leopard na waa Panthera pardus , marka Panthera waa Genus ka leo na waa species ka, Waxaa kaloo qaabkaan ku ogaan kartaa in libaaxu iyo Haramcadku ay wada xiriiraan oo ay iskaga mid yihiin qeybta magaca koowaad ee Panthera.
Magaca Seyniska ah waa in la jiijiifiyaa markii lagu daabacaayo buugaagta laakiin markii gacanta lagu qoraayo waa in hoos laga xariiqa mid kastaa goonidiisa tusaale, Panthera Leo.
Seynis yahanada waa in ay siiyaan xayawaanada iyo dhirta dhawaan la helay magac Laatiin ah.
Next post 8 Tallaabooyin oo ka Dhigaysa Subaxaada Mid Jawi Degan Ku Bilowda|TukeSomalism.com
Previous post Lama Huraan Waa Cawska Jiilaal |Tukesomalism.com